Qiimaha lagu iibsado qudaarta oo kor u kacay suuqyada Magaalada Garoowe Iyo Sababta oo la Ogaaday? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Qiimaha lagu iibsado qudaarta oo kor u kacay suuqyada Magaalada Garoowe Iyo...
Qiimaha lagu iibsado qudaarta oo kor u kacay suuqyada Magaalada Garoowe Iyo Sababta oo la Ogaaday?
Magaalada Garoowe ee Caasimada Maamulka Puntland waxaa maalmihii ugu dambeeyay laga dareemayay sarakac ku yimid qiimihii lagu kala iibsan jiray Khudradda , kadib markii ay istaagtay khudaartii ka imaan jirtay dalka Itoobiya.
Arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii ay shaqaaqo ku dhexmartay qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee wada dega dalka Itoobiya.
Suuqyada magaalada Garoowe ayaa qiimaha yaanyadu waxaa uu gaaray 60,000 kun oo shilinka Soomaaliga ah halka markii hore uu ahaa 30,000 oo shalinka Soomaaliga ah, sidoo kale waxaa sarakac weyni ku yimid qiimaha lagu iibsadao baradhada oo ka timaada dalka Itoobiya.
Qaar ka mid ah ganacsatada ayaa waxa ay inoo sheegeen in khudaartii Itoobiya markii la waayay, intii yareyd ee Bakhaarada tiilay ay qaaliyowday, taasi oo sababtay in sare u kac uu ku yimaado khudaarta.